Siyayichitha ekasomabhizinisi othe uthenga iMaritzburg isikhulu seqembu
Isikhulu seMarizburg United, uQuinton Jettoo sesikuchithile ukuthi leli qembu liyadayiswa, sithi lisazihlala eMgungundlovu nakule sizini ezayo. UJettoo ukuvumile nokho ukuthi banazo izinkinga zezimali nathe yikho okwenze badayise uThabiso Kutumela kwiMamelodi Sundowns.
“Ngicabanga ukuthi kube nokuxoveka kwezinto ngalolo daba,” kusho isikhulu lesi sikhuluma nabe-Inanda FM ngokudayiswa kweqembu ngempelasonto. “Usihlalo wayekuvezile kwasekuqaleni ukuthi ukudayisa yinto azoyenza uma sekubheda kakhulu.
“Wathi sizozama ukuthola abaxhasi, uma sehluleka sizobe sesibheka ukudayisa abadlali ukuze senze imali. Yilokho ke esikwenzayo njengamanje… ngebhadi akulula ke nalokho ngenxa yesimo somnotho okwamanje. Kodwa sikwazile ukudayisa noma kunjalo. Kwengikwaziyo iqembu alidayisi njengamanje,” kusho kanje.
Nokho ngokombiko wabeFAR Post ngempelasonto, usomabhizinisi waseMzimkhulu, uDkt Bongani Gumede uthe sekusele kancane aqede ngezingxoxo zokuthenga leli qembu. Uthe empeleni ubanjezelwe yizibhelu ebezihlasele KwaZulu-Natal ngesonto elidlule.
FUNDA NALA: Uthi sekusele kancane aqede ngezingxoxo zokuthenga iMaritburg usomabhizinisi
UJettoo uphinde wachaza nangesimo seqembu njengoba lilungiselela isizini. Izinhlelo zabo zike zamiswa kancane ngesonto elidlule ngenxa yezibhelu. Kodwa kubuye kwadlula zabuyela khona ensimini la ethi uJettoo abadlali banaqeqeshi bayazikhandla.
“Uma ngingathi yisimo esinzima lesi ngabe ngiyambathisa nje, kodwa ke impilo kumele iqhubeke. Sibe nesizini embi ngokudlule ngakho kudingeke senze izinguquko eqenjini. Sesizenzile ke kanti kusekhona nezinye esizozenza. Sizokwethula maduze bonke abadlali abasha abasayiniwe.
“Ngokwamalungiselelo, kusahamba kahle. Umqeqeshi nethimba lakhe basebenza ngokuzikhandla. Sike saba nekhefu lezinsuku ezimbalwa ngesonto elidlule ngenxa yesimo ebesenzeka ezweni ngaleso sikhathi. Kodwa ngenhlanhla sikwazile ukubuyela ejimini ngoLwesine.
Okwamanje asinayo imidlalo esizoba nayo (nokuzizwa amandla) ngakho sizoqhubeka ejimini silungiselela isizini,” kuchaza lesi sikhulu. IMaritzburg ayibanga nesizini enhle njengoba beyibuyele emkhubeni wayo wakudala wokuvika izembe. UJettoo uthi bazokugwema lokho kulokhu.
“Sayiqala kabi isizini, kwakunzima. Ngemuva kwemidlalo engu-15 sasinamaphuzu ayisishiyagalolunye kuphela. Sabe sesenza izinguquko futhi abaqeqeshi benza umsebenzi omuhle nabadlali bazimisela bameseka umqeqeshi. Ngenhlanhla sagcina sikwazile ukuphuma odakeni sasinda ezembeni.
“Zikhona izinto ezinhle ezenzekile ikakhulukazi emzuliswaneni wesibili… Uma kungabhekwa imiphumela yomzuliswano wesibili kuphela, singaphuma emaqenjini amane aphezulu. Kwasetshenzwa ukufeza lokho futhi uma singaqhubeka lapho nangesizini ezayo kungaba ngcono kakhulu.
“Into esiyihlosile ngesizini ezayo wukuthi sibe ngcono kakhulu. Hhayi ukuthi sithi sifuna ukusuka kunombolo-13 bese siya kunombolo 1, lokho kungabe sizisikela kwelinonile uma sikusho. Into esiyifunayo wukuthi singene emaqenjiniayisishiyagalombili aqeda phezulu ngesizini ezayo.
“Ngeke kube lula kodwa kuzodingeka sisebenze ngokuzikhandla ukuze sikufeze lokho. Uma senze njalo angiboni okungasivimba.” Impempe izoqhubeka nokulugada udaba lokudayiswa kweqembu bese ikubikela ngokwenzekayo ngesikhathi kwenzeka.
Previous Previous post: UShamsi ube yiqhawe lamaProteas eshwebisa i-Ireland koweT20
Next Next post: UFrosler noNgcobo sebebeke eceleni iChiefs, babheke injabulo kuma-Olympics